Qasr Al Watan | Ụwa nke Arab Heritage & Customs dị na Abu Dhabi
Qasr Al Watan na -anabata gị n'ime ụwa nketa na omenala ndị Arab. Ọ karịrị naanị obí eze, ihe ịtụnanya na pụrụ iche pụrụ iche na UAE. Obí Onye isi ala mepere ọhụrụ na-ezube inye ndị ọbịa nghọta siri ike karị UAE's eduga omenala na ụkpụrụ. Dị na Abu Dhabi na 'Obí nke Mba' emepeela ọnụ ụzọ ya maka ikiri ọha. Ọ na-adọrọ mmasị ma na-eku ume, na-ejupụta n'ịdị ebube.
Obí ahụ juputara na ihe ọmụma, onyinye, na nghọta nke ụkpụrụ ọchịchị nke mere ka akụkọ ihe mere eme nke obodo ahụ. UAE na ọhụụ ya maka ọdịnihu. A na-eji ọcha, odo, na acha anụnụ anụnụ chọọ ime ime ahụ mma iji gosi odida obodo ahụ. Ọ mejupụtara ọtụtụ nnukwu ebe gụnyere nnukwu nnukwu ọnụ ụlọ yana ime ụlọ jupụtara n'ihe enyere onyinye UAE onye isi ala site na mba dị iche iche gburugburu ụwa. Ọ bụkwa nwere ọbá akwụkwọ Qasr Al Watan, nke nwere nchịkọta nke akwụkwọ na akụrụngwa karịrị 50,000.
Ka m banyere n'ime ihe niile m mere, ọ tụrụ m n'anya ma hụ nnukwu ụlọ ọcha, ọmarịcha paseeji na chandelier dị egwu. Achọkwara m ihe ngosi, hụ ihe ngosi, mụta banyere ndị ọchịchị na ụlọ ọrụ mkpuchi, ma mee ememe ihe nketa Arab bara ụba nke mere obodo ukwu a. Mgbe m si n’otu ụlọ ezute gaa n’ọzọ, ọ masịrị m ịmụta banyere ndị ọchịchị na òtù ọchịchị bụ́ ndị kpụrụ a magburu onwe mba.
Isi ihe dị na Qasr Al Watan:
Nka na nka
Otu nwere ike mepụta oku oku ọdịnala na enyo mmekọrịta, ihe dọtara uche m ozugbo. Mmadụ nwekwara ike nwee mmasị n'ịrụ nka ndị Arab wee chọpụta onyinye nka mpaghara a.
Ọbá akwụkwọ Qasr Al Watan
Na-atụgharị uche na UAE Ọhụụ 2021, nke na-akwalite mmepe site na itinye ego n'uche na akụrụngwa mmadụ, ọbá akwụkwọ ahụ nwere nnukwu nchịkọta ihe ọmụma na ngalaba sayensị na nka n'ime UAE. Mbipụta ahụ karịrị afọ 35 nwere ọtụtụ akwụkwọ ndị metụtara isiokwu ndị gụnyere akụkọ ihe mere eme, ọdịdị ala, na ndị ọzọ. O nwekwara akwụkwọ na-elekwasị anya na mmepe, omenala, na mmezu nke United Arab Emirates.
Obí na Motion
Gosi akụkọ nke UAE gwara n'abalị jiri ụda dị egwu na ihe ngosi ọkụ. Akụkọ banyere oge gara aga, ugbu a na ọhụụ nke mba.
Ọchịchị na Mmụọ nke Mmekọrịta
UAE bụ mba ukwu taa n'ihi ụlọ ọrụ ọchịchị siri ike na ndị ọchịchị pụrụiche, ma n'oge gara aga ma ugbu a. Obí ahụ na-enye gị ohere inwe nghọta miri emi nke mmụọ nke ala a.
Enwere ụlọ ahịa ihe onyinye dị na ebe abụọ, otu na ebe ndị ọbịa na otu n'ime nnukwu ụlọ eze. Ụlọ ahịa ndị ahụ nwere akwụkwọ, ọla, iko, na ihe ncheta, ihe niile sitere na ọmarịcha ụkpụrụ ụlọ nke akara ala a. Qasr Al Watan na-enyekwa ihe ngosi abalị dị egwu, nke a na-eme kwa mgbede ọ bụla.
Njem a na-eme gburugburu ụlọ eze na-ebuli gị elu na ọnọdụ ọgbara ọhụrụ nke na-atọ ụtọ ma na-atụgharị uche na ọchịchị, nka na ihe ọmụma. Atụmatụ ndị dị mgbagwoju anya na-ewute gị. Ka m si n’ụlọ ezumezu ndị a pụta, enwere m obi ekele maka ihe mba ahụ meworo na atụmatụ ime n’ọdịnihu.
By eze 21|2022-05-23T17:53:06+05:30March 21st, 2019|blog|Comments Off na Qasr Al Watan niile na -eju gị anya